Sida Loo Xidho Ciidanka Cirka 1s: Tilmaamaha Habaynta AF1 -yada Cad - Style
Sida Loo Haboon Yahay oo Loo Xidho Ciidanka Cirka 1s
Uptowns. Jecel Dhibaatooyinka. B-Mores. Hawada Ciidamada. Kuwa Wax kasta oo aad doorato inaad wacdo '', Nike Air Force 1 waa mid ka sarraysa sida kabuhu kasta oo suurtogal noqon kara, isagoo ka helaya dhiirrigelin ka timaadda halyeeyga halyeeyga aficionados ilaa hoosta qofka cusub oo raba wax nadiif ah inuu ku laado. had iyo jeer waxay ahayd kiiska, iyadoo la tixgelinayo silhouette -ka kubbadda koleyga ee astaanta u ahaa ku dhowaad la joojiyay 1984 sababtuna tahay iibkii oo yaraaday - dhowr sano oo gaaban ka dib markii ugu horreysay ee la bilaabay 1982 - tan iyo markii la isku adkeeyay taariikhda dhaqanka kabuubyada, xitaa illaa laga gaarayo kabaha 2-aad ee ugu iibinta badan sannadka 2019 , oo xajinaya buunbuuninta Adidas Yeezy Boost 350 ama Jordan IV iyo XI Retros. Waxaana hubaal ah inaysan jirin ikhtiyaarro, maadaama ay u muuqato inay wax u jiraan miisaaniyad kasta. Haddii aad diyaar u tahay inaad ka soo saarto bucks bucks for a reale labo of the original 'The Ten' wadashaqaynta OFF-WHITE ama aad kaliya u baahan tahay dib-u-soo-kabasho 'Coke Whites' oo ka timaada Locker Foot ee suuqa.
Kala -duwanaanshaha AF1 ayaa runtii u oggolaanaya shaqsiyaadka inay ogaadaan sida kabaha ugu habboon yahay caqabadaha, laakiin had iyo jeer waa waafaqsan yahay. Iyo xaqiiqda ah in kuwani ay ahaayeen sanduuq baakad bilow ah oo bilaaw ah muddo ku dhow afartan sano ayaa ka hadlaysa mugga. Si kastaba ha ahaatee, xaarku si dhaqso ah ayuu bidix uga bixi karaa haddii aadan u hoggaansamin xeerarka aan qornayn ee naloo siiyay awoowayaasheen.
Si xikmad leh u dooro Dhererkaaga
Sawirka David Cabrera
In kasta oo 5'10 Twitter ay u badan tahay inay laba ilbidhiqsi ugu beddesho ilmahooda ugu horreeya, taasi maahan nooca 'dhererka' ee aan ka hadlayno. Xulashada mudnaanta leh ee u dhaxaysa Sare, Dhex, iyo Kala -duwanaanshaha hoose ee AF1 wuxuu udub dhexaad u ahaa cunto kariyeyaal badan oo BBQ ah iyo doodo ciyaarta oo isdaba joog ah. In kasta oo hoos -u -dhaca ay caadi ahaan ugu sarreeyaan liisas badan sababta oo ah kala -duwanaanshahooda, dhererka waa in la go'aamiyaa iyadoo lagu saleynayo dhowr arrimood. Tusaale ahaan, Highs waxay u muuqdaan inay u eg yihiin dhar-xireyaasha dadka lugta weyn, markaa si taxaddar leh ugu tallaabso cabbirka 13 walaalahay. Lows waa tagitaan xagaaga si loogu xidho gaagaaban, laakiin Mids ama Highs si fudud ayaa loogu beddeli karaa xaalad kasta oo caadi ah haddii lagu daro lammaane gaaban oo kubbadda kolayga ah.
Ma jiraan wax Cute ah oo ku saabsan Dirty Ass Air Force One aka Sida loo Nadiifiyo Ciidamada Cirka
Sawirka iyada oo loo marayo Asalka Asalka ah
Wada -sheekeysta Dhammaan Xiddigaha? Hubaal. Gawaarida Haa, maxaa diidaya? Laakiin AF1s? Qofna waa in aan lagu qabanin dharaartii laba Ciidan oo u eg in ay Coachella ku haysteen dhammaadka usbuuca oo isku dayaya in ay u fududeeyaan dib ugu noqoshada 'dunida dhabta ah.' Daryeelka ka-hortagga wuxuu la mid yahay, haddii uusan ka muhiimsanayn (kaliya weydii waalidkaaga) marka loo eego sida aad u nadiifiso Ciidmadaada kadib.
Biyo -xireenka Ku buufi maqaar, suede iyo/ama nubuck ka hor intaadan xirin iyo nadiifinta kadib. Isticmaal ugu yaraan laba jaakadood, iyadoo ku xiran badeecada, una daa inay qalalaan ka hor intaadan xidhin. Waxaa jira badeecooyin badan oo nadiifin ah oo u samayn doona khiyaamooyinka gaarka u ah agabyada Xoogaggaaga, laakiin waxaad u badan tahay inaad ka hesho lacagta ugu badan ee lacagtaada biyo, saabuun, lamaane sixir, iyo duco.
Sida Looga fogaado (loona hagaajiyo!) Abuuritaanka Weyn
Ku -soo -kabashada kabuubyada maqaarku waa lama huraan, gaar ahaan marka maqaarku bilaabo inuu jilco ka dib xidhmooyin badan. Laakiin waxaa jira siyaabo looga hortagi karo dillaac weyn. Isticmaal galinta xumbo oo aad ku dhex siqi karto kabahaaga sanduuqa suulka si aysan mar walba u qaadin tallaabo. Laakiin mar labaad, kuwani si fiican bay u shaqeeyaan. Marka, markay Ciidanku bilaabaan inay urursadaan kuwa xarkaha-xarkaha leh, qoyan tuwaal (doorbidaya mid cad ama aan ku xoqan doonin kabuhu) iyo voila! Waa nooca sixirka kabaha oo aan dhammaanteen jecelnahay inaan ogaanno sannado ka hor.
Haddii aad Tahay Mid Dhab ah, Ku Xidho 'Em Baggier/Surwaal Dheeraad ah oo Dabacsan
Waan ogahay sida ay ugu adag tahay dadka qaar inay ka dambeeyaan dhaqdhaqaaqa jilicsanaanta/lugta-ballaaran, laakiin haddii aad fiirineyso waxa aad ku xirto AF1-yadaada, waxaa laga yaabaa inay tahay waqtigii lagu raaci lahaa tareenka. Lammaane 874 Dickies oo caadi ah oo fadhiya midigta sare ee Lows -kaaga, ama xoogaa dhidid ah Nike hilib leh oo leh dabool dabacsan oo loogu talagalay Mids ama Highs ayaan waligood kugu marin habaabin.
Laakiin ka taxaddar goynta Denim -kaaga
Ilaa denim, dhererka iyo sida ay u dhacaan (ama ha u dhicin) dusha ciidamadaaga ayaa ah qodobka go'aaminaya. Runtii, kaliya nooc kasta oo denim ah ayaa la shaqayn kara Uptowns, laakiin WAA INAAD hubisaa inay xagga hoose ku duuban yihiin si ay waxoogaa u xirxiraan markay garaacaan kabaha. Xaqiiqdii ma doonaysid inaad halkaan u soo baxdo adigoo u eg Michael Jordan xaflad kasta oo ay ku sugan yihiin haween Latina ah, oo u malaynaya inuu ku helay 'jiinis wanaagsan'.
Hayso Lammaanaha Dhammaan Caddaanka Barafka
Nolosha waxaa jira saddex dammaanad: dhimasho, canshuur iyo sicir -bararka qiimaha ayaa xitaa saameyn ku yeelan doona qiimaha Coke Whites. Waa inay noqotaa iyada oo aan la dhihin qofku waa inuu lahaadaa ugu yaraan hal lammaane oo Cadaan-Cad-cad ah haddii aad xitaa aad u danaynayso Xoogagga. Si kastaba ha noqotee, haddii aad leedahay awood maaliyadeed, waxaa lama huraan ah inaad laba ka mid ah baraf ku hayso. Waligood kama bixi doonaan qaab -dhismeedka waxayna la socdaan wax walba. Waad ogtahay sida hooyadaa ay mar walba ugu hayn jirtay qaboojiyaha xoogaa digaag ah haddiiba aysan haysan wax kale oo ay ku kariso, welina waxay soo baxday bam (ilaa intaad xasuusatay inaad u soo saarto si aad u dhalaasho marka aad guriga ka timaaddo dugsiga)? Lammaane cusub oo xoogagga caddaanka ah oo dhami waa isku mid dhar kasta.
Sida Si Haboon Loo Xirto Ciidamada Cirka
strawberry cake cake cake recipe ka xoq
Waxaan si hubaal ah u hubaa inaysan jirin hal kabo oo ka badan 'sida loo dhejiyo' casharrada YouTube -ka marka loo eego AF1. Sida aad u xardhayso Xoogaggaagu waa hal dariiqo oo si dhab ah loogu muujiyo shaqsiyadaada. Laakiin ha noqon mid aad u qurux badan. Haddii aad doonaysid inaad tijaabisid laba-lux-galay-a-triple-axle ee daloolka, xusuusnow tan: aad ha ugu xidhin. Si kastaba ha ahaatee, dhererka xargaha ee la socda Lows iyo Mids ayaa ku habboon muuqaalka aan dabacsanayn ee aan dabacsanayn ilaa inta la sameeyay ilaa godkii ugu dambeeyay ama labaad-to-kii ugu dambeeyay. Oo haddii aad hesho lammaane leh xargaha oo eegaya sidan oo kale soo saar sanduuqa , sidaas ku hay! Waxay la mid tahay ilmo qurxoon oo qurux badan.
dhacdooyinka ugu wanaagsan ee had iyo jeer cadceedda leh
sida loo dubo oo loo qurxiyo keeg
waa kuma ciyaaryahanka ugu fiican taariikhda nba
ugaarsadaha s thompson daroogada maalinlaha ah